ब्रेकअप पछि भुलेर पनि नगुर्नस् यी पाँच गल्ती, जसले पछुताउनु परोस्:: Artha Dabali
ब्रेकअप पछि भुलेर पनि नगुर्नस् यी पाँच गल्ती, जसले पछुताउनु परोस्
कसैसँग सम्बन्ध टुट्नु भनेको सुन्नलाई जति सरल छ त्यसको कयौ गुणा बढी पीडा त्यो भोग्नेलाई थाहा हुन्छ । यसकारण सम्बन्ध टुटेपछि मानिसहरुलाई सम्हालिन निकै मुस्किल पर्छ । हामीले देखेका छौँ कतिपय सम्बन्ध टुटेका मानिसहरु लागूऔषधको सिकार समेत हुने गरेका छन् । डिप्रेसनमा जाने गर्दछन् ।
हरेक प्रेम सम्बन्ध विश्वासमा अडिएको हुन्छ । त्यसकारण उक्त सम्बन्ध टुटेपछि सम्हालिन निकै मुस्किल पर्छ । यस स्थितीमा आफूले गुमाउका प्रेम पुनः पाउनका लागि धेरै मानिसहरु विभिन्न गल्तीहरुगर्छन् । जुन गल्तीले उसलाई पछि पछुतो लाग्न सक्छ । ती गल्तीहरु केके हुन हेरौँ :
1. भुलेर पनि ब्लक नगर्ने
अक्सर ब्रेकपछि मानिसहरु रिसले आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकालाई बल्क गर्छन् । तपाईलाई थाहा छ तपाईको यस्तो क्रियाकलापले तपाईले चाहेको झनै बढी रिसाउँछन् । यसकारण तपाई भविष्यमा उनी/ऊ आफ्नो जीवनमा फर्किने मौका गुमाउनुहुनेछ ।
2. मोवाइल अफ नगर्ने
ब्रेकपछि मानिसहरु मोवाइल अफ गर्ने, रिसले फोन नउठाउने, नम्बर फेर्ने, रेसपोन्स नगर्ने जस्ता बेवकुफी काम गर्दछौँ । ब्रेकअपपछि पनि तपाई पहिले जस्तै सामान्य बन्नुहोस् ।
यदि तपाईले चाहेको मान्छेले फोन पछि तपाईलाई चाहेर फोन गर्दा तपाई वा तपाइले चाहेको मान्छेलाई तपाईको आवश्यकता पर्दा तपाईको साथ भएन भने सम्बन्ध झनै टाढा हुन पुग्छ ।
3.पुराना याद आउने सामानहरु राखिराख्ने
अक्सर मानिसहरु सम्बन्ध छुटिसेपछि पनि मोवाइलमा वा आफूसँग उनको/उसको यादमा केहि महत्त्वपूर्ण सामानहरु राख्छौँ ।
चाहे त्यो मोवाइलमा फोटो नै किन नहोस् । तर यसले हामीलाई झनै पीडा थप्ने काम गर्दछ । यसकारण उक्त परिस्थितीबाट बच्नका लागि प्रेमी वा प्रेमिकाका याद आउने कुनै पनि सामान वा वस्तु आफूसँग नराख्नुहोस् ।
4.सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ रहनुहोस् र उसको बारेमा सोच्न छा्ड्नुहोस्
धेरै मानिसहरु ब्रेकअपपछि सामाजिक सञ्जालमा खुले एक्सको बारेमा ओलोचना गर्दछन् । कि भने सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन्छन् ।
अब उसको बारेमा सोच्नु भनेको तपाईको समयको बर्बादी हो । सामाजिक सञ्जालमा उसको आलोचना गर्नुभन्दा आफू कसरी सफल हुने, के गर्ने भन्ने कुरामा मन लगाउनुहोस् । दैनिक काममा मन लगाउनुहोस् । व्यस्त रहनुहोस् ।